Scratux: နောက်ဆုံးထွက် GNU / Linux ပေါ်ရှိခြစ်ရာကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။ | Linux မှ
Scratux - နောက်ဆုံးထွက် GNU / Linux ပေါ်ရှိခြစ်ရာကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
ကျနော်တို့ပြီးသားယခင်ပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ GNU / Linux များ အများအားဖြင့် စံပြအော်ပရေတာစနစ် ဒါကြောင့်အတွေ့အကြုံရှိအသုံးပြုသူများနှင့် နိူး, အသည်းအသန်သို့မဟုတ်ကျောင်းသားများအလုပ်သို့မဟုတ်စတင်ပါ ပထမအဆင့် ၏ဤကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်အံ့သြစရာကမ်ဘာပျေါတှငျ ပရိုဂရမ်းမင်း.
ထိုသို့ CodeBlocks များ ကျောင်းသားများအတွက်မကြာခဏအသုံးဝင်သည် အလယ်တန်းနှင့်တက္ကသိုလ်ပညာရေး သိရန်စတင် C နှင့် C ++ ဘာသာစကား, ကုတ်ခြစ်ရာ ပုံမှန်အားဖြင့် programming language ကို ဂရပ်ဖစ်ရိုးရှင်းသောနှင့် didactic, ၏ကျောင်းသားများကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့စံပြ အခြေခံပညာ (ယောက်ျားလေးများ၊ မိန်းကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ) သည်ပရိုဂရမ်းမင်းကမ္ဘာ၏အခြေခံအယူအဆများကိုအနာဂတ်ပရိုဂရမ်းမင်းပါဝင်မှုနှင့်နောင်တွင်ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်သူတို့၏နားလည်မှုလွယ်ကူစေရန်။ ဤအတောအတွင်းသူ Scratux စီမံကိန်း အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုပါတယ် ခြစ်ရာ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်း အပေါ် GNU / Linux များ.
သို့ delve နိုင်သို့မဟုတ်လိုအပ်သောသောသူတို့အဘို့ CodeBlocks များသူတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ထုတ်ဝေမှုကိုအောက်ပါလင့်ခ်မှတဆင့်သွားရောက်နိုင်သည်။
"CodeBlocks သည်အခမဲ့ C၊ C ++ နှင့် Fortran IDE ဖြစ်ပြီးသုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်တည်ဆောက်ထားသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကျယ်ဝန်းပြီးအပြည့်အဝပြုပြင်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၎င်းသည်သင်လိုအပ်သောအင်္ဂါရပ်များပါသော IDE တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပြီး၎င်းသည်ပလက်ဖောင်းအားလုံးပေါ်တွင်တသမတ်တည်းပုံစံနှင့်လည်ပတ်မှုရှိသည်။"
2 Scratux: ပွင့်လင်းမြင်ကွင်း Desktop အတွက် Open Source Linux Binaries
2.1 Scratux ဆိုတာဘာလဲ။
ထိုအသို့စူးစမ်းရှာဖွေရန်နိုင်သို့မဟုတ်လိုအပ်သောသူတို့အဘို့ ကုတ်ခြစ်ရာ ၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ထုတ်ဝေမှုအောက်ရှိလင့်ခ်မှတဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
"Scratch သည် animation များကိုအလွယ်တကူဖန်တီးရန်နှင့်ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောအစီအစဉ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးရန်ပညာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုသော programming language တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဖျော်ဖြေရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာပညာရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဥပမာ - သိပ္ပံဆိုင်ရာစီမံကိန်းများ (စမ်းသပ်မှုများ၏စိတ်ကြိုက်နှင့်ပုံဖော်ခြင်း)၊ ကာတွန်းတင်ဆက်မှုများနှင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသောဟောပြောပွဲများ၊ ကာတွန်းလူမှုသိပ္ပံပုံပြင်များ၊ အခြားသူများ။"
Scratch 3.0 သင်ယူမှုပတ်ဝန်းကျင်၏ ဗားရှင်းအသစ်သည် ဤနေရာတွင်ဖြစ်သည်။
Scratux: ပွင့်လင်းမြင်ကွင်း Desktop အတွက် Open Source Linux Binaries
မူလက ကုတ်ခြစ်ရာ ဒီတစ်ခုပဲ တရားဝင်ရရှိနိုင်ပါသည် ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်နှင့်အပေါ်အသုံးပြုရန် Windows (10+), MacOS (10.13+), ChromeOS နှင့် Android (6.0+)အချို့အနေဖြင့် GNU / Linux ဖြန့်ဝေမှုများ ၎င်း၏အလွန်အတွက်ဇာတိရရှိနိုင်ပါသည် ဗားရှင်း ၁.၄။ ငါကိုယ်တိုင်ကူးထည့်ပြီးပြီ MX Linux ကို 19.3 ၎င်းကို command prompt ဖြင့်အောင်မြင်စွာ run နိုင်ပါပြီ။
ဒီဟာက၊ Scratux စီမံကိန်း၎င်း၏အတွက်ဖော်ပြထားတဲ့အရာ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် အဖြစ်:
"Scratux သည်အခြေခံအားဖြင့်ကလေးသူငယ်များအတွက်ရည်ရွယ်ထားသောအခြေခံပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည် block ကဲ့သို့သော interface ကို အသုံးပြု၍ စီမံကိန်းများကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ Scratux ဖြင့်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပုံပြင်များ၊ ဂိမ်းများနှင့်ကာတွန်းရုပ်ပုံများကိုပရိုဂရမ်ရေးဆွဲနိုင်ပြီးသင်၏ဖန်တီးမှုများကိုအွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းမှအခြားသူများအားဝေမျှနိုင်သည်။"
"အခြေခံအားဖြင့် Scratux သည် Scratch Offline Editor ဟုခေါ်သော Scratch Desktop အတွက် Linux နှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ် Linux binaries များကိုထောက်ပံ့ရန်ရည်ရွယ်သည်။ Official Scratch Project သည် Linux ဖြန့်ဝေမှုများအတွက် binaries များကိုမထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစီမံကိန်းကိုဖန်တီးပြီးဖြစ်သည်။ source code မှတည်ဆောက်မှုကိုထပ်မံကူးယူစရာမလိုတော့ပေ။ သင်ရုံကလစ်နှိပ် install လုပ်ဖို့ရှိသည်။ Scratux သည်ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားပြီးနောက်ဆုံးတည်ငြိမ်သည့်နောက်ဆုံးပေါ် Scratch ကိုအခြေခံသည်။ (လောလောဆယ် Scratch Desktop 3.10.2)".
ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်အောက်ပါရရှိနိုင်ပါသည် GitHub အပေါ်တရားဝင် link ကိုသို့သော်အတိုကောက်ပုံစံအတွက်ဤလိုအပ်သောအဆင့်များမှာ:
လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကောင်းသွားပြီဆိုလျှင်၎င်းသည်ပြီးမြောက်နိုင်သည် Scratux ပါ command ကိုအသုံးပြုခြင်း "ကြိုး" o "Npm" အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း:
ဒါမှမဟုတ်လိုအပ်ရင်သင်လုပ်နိုင်တယ် သီးခြား executable တည်ဆောက်နိုင်ခြင်း (launchers) အောက်ပါ command command ကိုအသုံးပြု။ :
မှတ်ချက်ဖြေ - အဲဒါကိုအောင်အောင်မြင်မြင်စုဆောင်းပြီးအောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်နိုင်ဖို့အနည်းဆုံးမှန်ကန်သောလက်ခံနိုင်တဲ့မူကွဲအချို့ရှိထားဖို့လိုတယ်။ "Npm"။ အကယ်၍ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်သင်၏ရှုပ်ထွေးသော (သို့) မဖြစ်နိုင်သောဖြစ်နိုင်လျှင် GNU / Linux Distro ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်လုံခြုံ option ကိုအမြဲရရှိနိုင်ပါသည် ၎င်းကို Flathub ဖြင့် Flatpak မှတစ်ဆင့် install လုပ်ပါ အောက်ပါ command command ကိုအသုံးပြု။ :
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Scratux», သော၏အသုံးပြုမှုကိုစေရန်အလုပ်လုပ်တဲ့လမ်းကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအသုံးဝင်သောစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည် နောက်ဆုံးပေါ်တည်ငြိမ် binaries de Desktop ကို Scratch လုပ်ပါ အပေါ် GNU / Linux များ, အလှည့်အတွက်တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် programming language ကို ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များကိုမိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုသည်၊ ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောပရိုဂရမ်းမင်းပါဝင်သောအကြောင်းအရာနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိသည် တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Scratux - နောက်ဆုံးထွက် GNU / Linux ပေါ်ရှိခြစ်ရာကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
Jesus Ballesteros ဟုသူကပြောသည်
Hmmm, Scratux with Scratch သည်အခြေခံအားဖြင့် Red Hat နှင့် Centos ကဲ့သို့တူညီသလော။
Jesús Ballesteros အားပြန်ပြောပါ
ယေရှု၊ ဟုတ်ကဲ့။ တနည်းအားဖြင့် Scratux သည် Scratch Project ၏ binaries အရ GNU / Linux အသုံးပြုသူများအားဖော်ပြထားသော Operating System ရှိနောက်ဆုံးပေါ်မူကွဲများကိုဖော်ပြပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် Scratux သည် binaries မှရည်ညွှန်းချက်အားလုံးကိုဖျက်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းမပြုလုပ်သော်လည်း၎င်းသည် batchurcation ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ငါ RedOSH နှင့်အတူ CentOS နားလည်သကဲ့သို့အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အမှတ်တံဆိပ် Scratch ရန်။
ရဲ့ ACME မှတဆင့်အခြား Encrypt လုပ်နည်းများကြီးထွားလာလျက်ရှိသည်